မန္တလေး၊ ဇွန် ၂၇ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တမူးခရိုင် ခမ်းပတ်ဒေသထွက် နာနတ်သီးများမှာ ရာသီဥတုပျက်ယွင်းမှုကြောင့် အထွက်နှုန်းနည်းပါးသော်လည်း ဝယ်ယူမှုများပြား နေသည့်အတွက် ဈေးကောင်းရ အမြတ်ကျန်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ခမ်းပတ်နာနတ်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များ၏ နည်းပညာဖြင့် စိုက်ပျိုးခဲ့သော မဏိပူရနာနတ်မျိုးရင်းဖြစ်ပြီး ယခင် ကာလများက အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူ ရကသည်း ပြည်နယ်သို့လည်း ကောင်း၊ မီဇိုရမ်ဘက်သို့လည်း ကောင်း တင်ပို့ရောင်းချမှုများရှိခဲ့ ပြီး ယခုလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ...
IN: Regional BY: MOS 28 Jun, 2019
မြဝတီ၊ ဇွန် ၂၇ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာအလုပ်သမားများအား ဇွန် ၂၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မြဝတီမြို့ မြဝတီခရိုင် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ယာယီ စောင့် ရှောက်ရေးဂေဟာသို့ ထိုင်းတာဝန်ရှိသူများမှ လာရောက်လွှဲ ပြောင်းပေးအပ်ခဲ့သည်။ ယင်းသို့ လွှဲပြောင်းပေအပ်ရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးနှင့် လူထုလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး Mr; Ratchapon Meneetek ခေါင်းဆောင်သည့် တာဝန်ရှိသူများမှ လူကုန်ကူးခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား အမျိုးသား ၁၈ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၁၁ ဦ...
IN: Others BY: KKTM(MWD 28 Jun, 2019
IN: Business BY: NT, TTMT 28 Jun, 2019
IN: Regional BY: ZZ 28 Jun, 2019
IN: Business BY: TTMT 28 Jun, 2019
IN: Political BY: M Bwe 07 Jun, 2019
IN: Political BY: WYHW 07 Jun, 2019
မန္တလေး၊ ဇွန် ၂၇ မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တမူးခရိုင် ခမ်းပတ်ဒေသထွက် နာနတ်သီးများမှာ ရာသီဥတုပျက်ယွင်းမှုကြောင့် အထွက်နှုန်းနည်းပါးသော်လည်း ဝယ်ယူမှုများပြား နေသည့်အတွက် ဈေးကောင်းရ အမြတ...
IN: Business BY: GC 28 Jun, 2019
မန်ယူအသင်းသည် ယခုနွေရာသီတွင် ဒုတိယမြောက်ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူမှုအဖြစ် ခရစ္စတယ်ပဲလေ့စ်မှ လူငယ်နောက်ခံလူ ဘစ်ဆာကာကို ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မန်ယူအသင်း...
IN: Sport BY: KKW 28 Jun, 2019
IN: World News BY: M Bwe 28 Jun, 2019
IN: Entertainment BY: ၀ိုင်နေ 07 Jun, 2019
IN: Entertainment BY: ၀ိုင်နေ 07 Jun, 2019
လော့စ်အိန်ဂျလိစ် အမေရိကန် လော့စ်အိန်ဂျလိစ် စီရင်စုတွင် အိုးအိမ်အခြေအနေမဲ့ သူများ ၅၉ဝဝဝ ဦးရှိနေကာ ယ...
IN: Life BY: M Bwe 07 Jun, 2019
နေပြည်တော် မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် နိုင်ငံအများအပြား အလေးထားဖြေရှင်းရန် လိုအပ်နေသည်မှာ လေထုညစ်ညမ်းမှု ...
IN: Life BY: MP 07 Jun, 2019
ရန်ကုန် နောက်ဖေးလမ်းကြားသို့ စည်းကမ်းမဲ့အမှိုက်ပစ် ခြင်းသည် လေထုကိုညစ်ညမ်းစေ နိုင်ကြောင်းနှင့် စွန်...
IN: Life BY: TTHL 07 Jun, 2019
ဝါရှင်တန် တစ်နေ့လျှင် ခြေလှမ်း ၇၅ဝဝ လမ်း လျှောက်သော အမျိုးသမီးကြီးများက သာမန်သူများထက် သေဆုံးနိုင်ေ...
IN: Life BY: M Bwe 06 Jun, 2019
အေသင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေ သောရောဂါများကြောင့် နှစ်စဉ် ဂရိလူမျိုး ၁၅ဝဝဝ ကျော် သေဆုံးနေရက...
လန်ဒန် အလွန်အမင်းအိပ်ခြင်းက မှတ်ဉာဏ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ကြောင်း မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုတစ်ခု...
IN: Others BY: WYHW 28 Jun, 2019
IN: Others BY: ZC 28 Jun, 2019